Istragi: Lawula uMbhobho wakho weNtengiso kwiGmail ngale CRM igcweleyo | Martech Zone
Emva kokuba ndizenzele igama elihle kwaye ndihlala ndisebenza kwindawo yam, ukuthetha kwam, ukubhala kwam, udliwanondlebe lwam, kunye namashishini am… inani leempendulo kunye nokulandelwa endikudinga ukukwenza rhoqo ukutyhoboza kwintanda. Andithandabuzi ukuba ndiphulukene namathuba amahle ngenxa yokuba ndingakhange ndilandele ithemba ngexesha elifanelekileyo.
Umcimbi, nangona kunjalo, kukuba umyinge wokuchukumisa endifuna ukuwenza ukuze ndifumane ukubandakanyeka kweshishini ekumgangatho omkhulu kakhulu. Ngapha koko, ndiqinisekile ukuba ndilandele zonke izicelo ezingasokuze ndibenalo ixesha lokugqibezela umsebenzi womthengi! Nangona kunjalo, ukwakha umbhobho oqinileyo kubalulekile njengoko ugqibezela iiprojekthi kwaye usiya kubathengi. Kuya kufuneka usebenze ngokukuko ngexesha lakho… ngamaxesha athile uchukumisa ithemba ngalinye, ulifanele, kwaye uqhubele phambili ngenkqubo yakho yokuthengisa.
Lonke ishishini elikhulu linemibhobho yokuthengisa esebenzayo apho beqonda inqanaba abakulo, osondeleyo ekuvaleni, kunye nokukwazi ukuqikelela amandla abo okuvala nokukhulisa amashishini. Kuyandoyikisa oku kwaye andikholelwa ukuba imeko yam yahlukile. Ndiyakholelwa ukuba uninzi lwamashishini amancinci asokolayo ekulawuleni imibhobho yokuthengisa kunye nokufaneleka ngokufanelekileyo kunye nokususa izikhokelo. Ngokukodwa xa bengaqeqeshwanga ngokufanelekileyo kwaye banamava okuthengisa.
Kulapho a Ulawulo oludibene nabathengi (CRMInkqubo iyimfuneko. NgeCRM, unokufaka iflegi kwithemba lakho, ugcine amanqaku kuwo, uchonge inqanaba lomjikelo wentengiso abakulo, wenze imisebenzi yokulandela, kwaye ulawule ngokufanelekileyo ubudlelwane bakho beshishini. Kwaye ... ukuba umbutho wakho unamalungu amaninzi, ungaphatha ngokufanelekileyo ukukhutshwa kunye nokunikezelwa kwakhona phakathi kwabasebenzi bakho.
Istrak: Lawula uMbhobho wakho weNtengiso ngaphakathi kweGmail
Ukuqwalasela nokulawula enye iphakheji yesoftware ukwenza oku ngumsebenzi ongaphezulu, hayi ngaphantsi. Uninzi lomsebenzi lwenzeka nge-imeyile, ke ukuba ne-CRM edibanisa neqonga lakho le-imeyile yinto ekufuneka yenziwe ukuze kube lula ukusebenza ngokukuko. Ukuba ishishini lakho lisebenza kwi Uphando, I-Streak inokuba sisisombululo esifanelekileyo kuwe.
I-Streak idibanisa ngokuthe ngqo kunye ne-inbox yakho ye-Gmail, ineefowuni zebrawuza, kwaye inesicelo esikhulu esiphathwayo. Iimpawu zeStreak zibandakanya:
I-CRM eDityanisiweyo yeGmail - yonke into oyifunayo ukuze ufike "kwi-win-win" ifihliwe kwi-imeyile yakho. I-Streak ibamba imicimbi yakho kwaye yandisa i-Gmail ekhoyo kwi-CRM eguqukayo, ebonakalayo ngokupheleleyo.
Yenza inkqubo yokuThengisa kwakho -Xa isicwangciso sakho sentengiso sitshintsha, uhlaziyo lweStrak lukhawuleza kwaye lunomdla. Yongeza ikholamu entsha yalo naluphi na uhlobo, hlela kwakhona amanqanaba, okanye ucime idatha nangaliphi na ixesha. Iikholamu ziyilelwe ngokukodwa ukwamkela amanani, isicatshulwa esisefom simahla, iimenyu zokuwa ezantsi, iibhokisi zokujonga kunye nayo nayiphi na into onokuyifuna.
Thengisa ngokubambisana - Bonke abo basebenzisana nabo ngethuba banokufunda ii-imeyile ezipheleleyo nokuba ayibandakanywanga umsonto. Unokulawula ukufikelela kwedatha kuwo onke amalungu eqela lakho ngeendima zemvume.
Iphaneli yebhokisi engenayo -Gcina amanqaku, yabela imisebenzi kunye nokulandelela ngqo ukusuka kwiphaneli edityaniswe kakuhle kwiiplagi zesikhangeli seStreak seChannel okanye iSafari.
Iziqwengana ze-imeyile Faka isicatshulwa esiqhelekileyo esiphindaphindwayo ngomyalelo ophambili. Ngokukhawuleza bhala intshayelelo, ukulandelela, kunye nezikhumbuzo. Ukuphelisa ixesha elichithwayo kunye nokuphindaphinda.
Ukulandelwa kwe-imeyile Ukulandela umkhondo kukwazisa ukuba i-imeyile ijongwa nini, phi, kwaye kangaphi. Sebenzisa iStrak ukubiza isikhokelo ngalo mzuzu kanye bacinga ngawe.
Ukudibanisa Imeyile -Umbambo uphelisa ubunzima beimeyile ezininzi. Bhala umyalezo wakho, khetha uluhlu lwabamkeli, uze ubathumele.
Ukuxelwa kwemibhobho -Ukwenza iitshathi ezinemibala kunye negrafu kulula ngeStrak. Jonga indlela imali ehamba ngayo kumbhobho wakho kunye nabanikeli benza igalelo elikhulu.
Ukubhengezwa: Ndililungu le I-Streak kwaye ndisebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: usetyenziso lwe-androidI-Android crmiplagi yesikhangelichrome iplagiCRMulawulo oludibene nabathengiukulandelisainboxI-gmail crmUkulandelela i-gmailgoogle suiteIndawo yokusebenzela kaGoogleusetyenziso lwe-iosIkhompyuter ye-iOSisabelo sokukhokelaisiqinisekiso esikhokelayoUkudibanisa imeyilemomeamathembaulwandiso lwe-safariUmbhobho wokuthengisaI-Streakimisebenziukuthengisa iqela